Waxaan rajeyneynaa inaad fursad u heshay hadda in aan aqrinno cusub hadal qoraal ah iyo Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah 2019-2021.
Aad ayaan ugu mahadcelineynaa dhammaan aragtida, su'aalaha, la taliyaha, iyo bixinta niyad-wanaagga tan iyo bilawgii Janaayo. Mahad gaar ah ayaad u leedahay kuwa qaatay wakhtigii dhamaystirnaa sahankeena - 108 idinka mid ah! Waanu akhrinaa jawaab-celinta leh xiiso weyn.
Marka masruufka uu soo saaro sahan dadweyne, waxaan aaminsanahay in ay muhiim tahay in la soo sheego natiijooyinka. Xaaladdan, waxaan ku faraxsannahay inaan aragno isku dhafnaan aad udhexaad ah oo u dhexeeya waxa ugu sarreeya ee udhaxeeya lamaanayaasheenna ku sugan beesha iyo ujeeddooyinka nalalka.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah mawduucyada ugu muhiimsan iyo su'aalaha ka soo baxay - faallooyin wakiil ah oo loo eego oo dhan:
Ducada: Dad badan ayaa la wadaagay dareenkeena dareen degdeg ah oo ku saabsan waqtiyada adag ee aan ku nool nahay iyo walbahaarka sii kordhaya ee ku saabsan nidaamka dabiiciga ah iyo bulshada.
"Bang! Tani waa marxalad aad u muhiim ah taariikhdeena, sidaa daraadeed waxaan kor u qaadeynaa cayaarteena oo waxaan ku boorrinaynaa inaad isku sameyso. Waxaan ubaahanahay DHAMMAAN inay gacmaheena saaraan waxaanan halkaas kula joognaa. "
"Wicitaan ficil ah. Anigu waxaan ahay ED ee ururada farshaxanka, iyo dukumiintiga istiraatiijiyadeed ee istaraatiijiga ah ayaa iga goostay in aan shaqadeena si aad ah u culus u eegno waxa aan qabano / qaban karno / inaan sameyno beesha aan u adeegno. Shaqaalahaygan aad u yar ayaa sidoo kale la tuurayaa, sidoo kale. "
Isbeddelka Cimilada: Dadku waxay tilmaameen meelo gaar ah oo ay dareemeen xaalad deg deg ah, gaar ahaan xaddidaadda wakhtiga xaddidan ee aan sameyneyno si looga hortago dhacdooyinka ugu xun ee mustaqbalka dhulkayaga iyo dhammaan nolosheeda.
"Waxaan ka mahadcelinayaa inaad ereyga dhulka ku qortay ereyga aragtidaada .... Indhaha oo dhan waxay u baahan yihiin inay joogaan dhulkayaga. "
"Nidaamka bulshada ee xallinta dhibaatooyinka waxaa la xoojiyay sanado badan (feker qumman iyo kalsooni, dhageysiga codadka ugu sarreeya, ugu wanaagsan ee la maalgeliyo, ama inta badan la isku xidho, iwm). McKnight ayaa si gaar ah loogu talagalay in uu noqdo kartida ugu weyn ee isbedelada weyn ee aan u baahanahay si aan wax uga qabano isbeddelka cimilada isla markaana u dhaqaaqo mustaqbal nadiif ah oo soo jiidasho leh. "
Sinaanta: Dad badan ayaa ogaaday sida aan sare u qaadnay iyo isku dheelitirnaanta guud ee guud ee Qaabdhismeedka. Waxaan sii wadeynaa kala duwanaanta, sinnaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI) inay ahaato mudnaanta aasaaska, gaar ahaan marka ay timaado kor u qaadista sinaanta ee ka jirta waddankeena.
"A 'mustaqbalka, hal abuurka, iyo mustaqbalka badan' waa dhab ahaan Minnesota u baahan tahay. Waxaan sidoo kale ka mahadcelinayaa cadeyntaada cad ee salka ku haya sinnaanta iyo qeexitaanka gaarka ah ee 'kala duwanaanta jinsiyada' sida arrin lagu xalinayo. Taas ayaa ka dhigaysa ururo ka cabsanaya inay magacawdo arrimaha gaarka ah ee looga cabsanayo inay ku dabaaldegaan doonida. "
"Qaab dhismeedka Qaabdhismeedka hawsha beesha ee ku saabsan hanti, awood, iyo bogsoon halkii laga heli lahaa meel sadaqo ah iyo dayactir. Taas ayaa sheegtay, waxay sidoo kale qiratay in ay waxyeelo u tahay in dhismeyaasheenna hadda ah ay sababaan oo sii wadaan. "
Qaar kale waxay inoo xusuusiyeen in DEI ay tahay shaqo loo abuuray, iyo inaan u baahanahay in aan tixgelinno jinsiyada, waddanka asalkiisu ka soo jeedo, luqada, juqraafi, iyo astaamaha dhaqamada dheeraadka ah. Mid ka mid ah ayaa na waydiistay inaan tixgelinno baahida ururada yaryar oo ay hoggaamiyaan dadka midabka ah, jawaab celiye kale ayaa ka walwalsanaa feejignaanta hantida iyo awoodda gacanta.
Qeexida Badanaa: Mid ka mid ah su'aalaha ugu sareeya: Maxaad ula jeedaa badan? Ereygan ayaa roonaaday qaar kale oo la yaab leh.
Marka aynu nidhaahno badan, waxaan ku tilmaameynaa fikradda weyn iyo dareenka aan leenahay dad ahaan, iyo sidoo kale deeqsinimada nidaamyada dabiiciga ah. Waxaan si weyn u saameeyeen caqiidooyinka biomimicry, kaas oo inoo baraya in aan horeyba u haysanay wax ka badan baahida aan u qabno haddii aan isticmaalno khayraadkeena si caqligal ah. Tusaale ahaan, dabeecadu waxay ku socotaa iftiinka qoraxda. Ka soo xigtay Kathleen Allen buugeeda Hogaaminta Roots, "Dhamaan noolasha-noolaha, shimbiraha, raxmadda, iyo nuujiyada - waxaa tamarta tamarta ka soo baxa qorraxda. Qorraxdu maaha oo keliya, waa bilaash! Waa arrin la yaab leh in la ogaado in dhammaan noloshu ay ka bilaabato ficillada noocan oo kale ah. "
Ka bilaabashada maskax badan, halkii aan ka ahayn cabsida ku salaysan maskaxda, waxay naga dhigtaa inaan qiyaasno xalal cusub.
Sida aan u maalgelino: Waa kuwan su'aal kale oo aan maqalnay: Miyaad maalgelin doontaa maalgalin dheeraad ah oo barnaamijka la xidhiidha (PRIs)?
Waxaan sii wadi doonaa inaan tixgelinno fursadaha PRI ee cusub oo ku haboon qaabkayaga. (Booqo annaga saameynta maalgelinta bogga 'FAQ' si ay u arkaan shuruudaha.) Tan iyo markii la bilaabay saamaynta maal-gashiga 2013-ka, waxaan mar hore u wareegay saddex meelood oo ka mid ah dollarkeena dakhliga ee maal-gashiga maalgashiga ama maal-gelinta istiraatiijiga ah. Taas macnaheedu waa mid ka mid ah saddexda doolar ee McKnight ku maalgalinayaan oo la jaan qaadaya qiimaha aan ku leenahay.
Maxaa Xiga? Qorshahan cusub ee Istaraatijiyadda Istaraatiijiga ah ayaa si dabiici ah u dhaliyey su'aalo ku saabsan waxa, haddii wax, laga yaabo inay bedelaan McKnight:
"Maxaa isbeddel ah ee barnaamijyada deeq-bixiyeyaasha soo socda? Inaad si cad u qorto sidii aad u malayn lahayd inaad u cabbiri lahayd kuwan waa muhiim (berrinka). "
Waxaanu qiimaynaa shaqada muhiimka ah ee aad qabato, waxaanan ognahay in dad badani rabaan inay maqlaan waxa xiga. Waqtigan xaadirka ah, ma hayno wax isbeddel ah oo lagu soo bandhigo oo aan kugula socodsiinno haddii iyo sida deeq-bixiyeha isbeddelo. Waxaynu aragnaa qaabka Istaraatijiyadda Istaraatiijiga ah oo ah dukumiinti ku salaysan, waxaanan si joogta ah dib u eegeynaa sida ugu wanaagsan ee loo hormarin karo hawlahayaga oo aan u dhigno qiyamkayaga.
Waad ku mahadsantihiin wax badan oo aad samaynayso oo dhan si aad u sameyso isbedel wanaagsan.
Mawduuca: Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah